Kafiilka - BullyingCanada
wuxuu u baahan yahay taageeradaada Taageer Shaqadeena Muhiimka ah Deeqsinnimadaada waxay badbaadisaa nolosha Hel ka qayb Waad Caawin Kartaa BullyingCanada waxay ku tiirsan tahay deeqsinimada
BullyingCanada uga mahad celinaya ururadan deeqsinimada aan caadiga ahayn taageeradooda aragti iyo naxariis leh.
Waad ku mahadsan tahay deeq-bixiyeyaasha soo socda ee taageeradooda muuqda BullyingCanada.
Taageerada dhaqaale iyo tan nooceed ee ay bixiyaan ururadani waxa ay door wax ku ool ah ka ciyaartaa in aanu ka jawaabno boqollaal kun oo qaylo dhaan ah oo aanu sanad walba ka helno dhalinyarada la xoogsheegtay iyo dadka waaweyn ee daneeya iyaga.
Haddii aad jeclaan lahayd inaad barato sida loo taageero BullyingCanada-Shakhsi ahaan ama urur ahaan-ba waxaan kugu martiqaadaynaa inaad nala soo xidhiidho ama aad sahamiso boggayaga ka qaybgalka.
Taageerayaasheena Qiimaha leh
Shirkadahani waxay bixiyaan taageero muhiim ah iyagoo ugu deeqaya alaabooyin iyo adeegyo BullyingCanada.
Webhosting waxaa bixiya Kualo.
Waxa jira shabakado ku xidhan oo ka socda boggan oo ay maamulaan ama ay samaysteen ama ururo, shirkado, ama shakhsiyaad aan xidhiidh la lahayn BullyingCanada. Hay'adahan, shirkadaha, ama shakhsiyaadka ayaa keligood mas'uul ka ah hawlgalka iyo macluumaadka (ay ku jirto xaqa ay u leeyihiin inay soo bandhigaan macluumaadkaas) ee laga helo shabakadahooda. Ku xidhidhiyaha ama ka soo bixida goobtan ma khusayso dhinaca BullyingCanada taageero kasta ama dammaanad kasta oo ka mid ah ururada ama macluumaadka (ay ku jirto xaqa ay u leeyihiin inay soo bandhigaan macluumaadkaas) ee laga helay mareegaha ay ka tirsan yihiin.
BullyingCanada ma qaato mana mas'uul ka tahay wax kasta oo mas'uuliyad ah si kastaba ha ahaatee isku xirka mid ka mid ah shabakadaha internetka ee ku xiran, isticmaalka goobaha ku xiran ee dhajinta ama wadaaga macluumaadka, hawlgalka ama waxa ku jira (oo ay ku jiraan xuquuqda soo bandhigida macluumaadkaas) mid kasta oo ka mid ah mareegaha internetka ee ku xiran, ama mid ka mid ah macluumaadka, tarjumaadda, faallooyinka ama fikradaha lagu muujiyay mid ka mid ah boggaga internetka ee ku xiran. Wixii faallo ah ama weydiimo ah oo ku saabsan mareegaha ku xidhan waa in lagu hagaajiyaa hay'adda gaarka ah ee mareegaha gaarka ah loo shaqeeyo.
Marka aad baxdo BullyingCanadawebsite-ka, BullyingCanadaSiyaasadda gaarka ah hadda ma khusayso.
Siyaabaha Kale ee Loo Taageero BullyingCanada
Wax-siinta onlaynka ka sokow, waxa jira dhawr siyaabood oo lagu taageero shaqadeena nafaha lagu badbaadinayo.
Mahadsanid taageereyaasheenna qiimaha leh, ee deeqsinimada leh!
Nagu taageeridda dhaqaale ururinta waxay noqon kartaa mid fudud oo xiiso leh!
Iskaashatada shirkadu waxay faa'iido u yeelan kartaa labadaba BullyingCanada iyo ganacsigaaga!
Hadiyadaha waaweyn awood BullyingCanada in badan la sameeyo!
Baabuurta aan la rabin waxay isu beddelaan taageero deeqsinimo leh!
Dhaxal xusuus leh uga tag oo taageer dhallinyarada jiilasha soo socda!